दाङमा गोमन सर्पले देखायो यस्तो चमत्कार, स्थानीयहरू काम्न थाले « Postpati – News For All
दाङमा गोमन सर्पले देखायो यस्तो चमत्कार, स्थानीयहरू काम्न थाले
पुस २१, दाङ । दाङमा नियमित एकै स्थानमा बस्ने सर्पलाई ‘नाग देवता’ भन्दै पूजा आराधना गर्न थालिएको छ।
यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बनहरीस्थित थारु गाउँमा विगत झन्डै एक महिनादेखि गोमन सर्प एकै ठाउँमा देखिन थालेपछि त्यसलाई ‘नाग देवता’ भन्दै स्थानीयले पूजाआजा गर्दै आएका छन्।
गोमन सर्पलाई ‘नाग देवता’को संज्ञा दिँदै पूजा गर्दै आएका स्थानीयले गाईको दूध र जल पनि चढाउँदै आएको बताए।
हाल सर्प देखिएको यो स्थानमा दुई/तीन वर्ष अगाडिसम्म थारु समुदायका देवता भूँयारथान रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। स्थानीयका अनुसार उक्त गोमन सर्प विगत एक महिनादेखि बिहान ठिक ९ बज्दा दुलोबाट निस्कने गर्छ र एक घन्टापछि दुलो भित्र छिर्छ अनि फेरि ११ बजेतिर त्यसैगरी निस्केर आधा घन्टा जति घाम तापेर फेरि भित्र पस्छ।
७२ वर्षीय स्थानीय हरिराम चौधरीले त्यसलाई डुमेनी सर्प भन्दै मार्न प्रयास गरेपनि संभव नभएको बताए। ‘मैले त्यो बस्ने दुलोमा ध्वाँरेर (धुँवा बनाएर) मार्न भनि आगो बाल्न खोजेको थिएँ,तर सकिनँ,’ चौधरीले भने ।
‘सबैले नाग देवता भन्दै पूजा गर्न थालेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘म त अलमलमा परेको छु कि यो साप हो कि नाग हो।’ त्यस्तै स्थानीय ५७ वर्षीय दलवीर चौधरीले पनि त्यो सर्पलाई नाग देवता नै भएको दाबी गरे।
‘म त शिवको भक्त हुँ, नित्य पूजा गर्छु त्यसैले मैले हातले सुमसुम्याउँदा समेत उहाँले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन,’ चौधरीले भने।
स्थानीयहरू काम्न थाले
अचम्मैको कुरा के छ भने जहाँ सर्प देखिने गरेको छ त्यहाँ स्थानीयस्तरमा ‘माता’को उपमा पाएका केही महिला र किशोरीहरू आएर काम्ने गरेका छन्।
यसअघि घोराही, खाद्रे र पश्चिम दाङबाट आएका ती ‘माता’हरू पूजा आराधना गर्दै दिनभर काम्ने गरेको सर्वसाधारणले बताए।
शुक्रबार बिहान ११ बजेतिर त्यहाँ त्यस्दै दृश्य देखियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ खाद्रै निवासी ‘माता’भनिने ५३ वर्षीया प्रेमा खड्का उक्त गोमन सर्प भएको स्थानमा आउने बित्तिकै काम्न थालेकी थिइन्। एकैछिनमा उनी बर्बराउँदै ‘नाग देवता’ भन्दै कामेर बर्बराउन थालिन्।
केहीबेरमै त्यहाँ उपस्थित स्थानीय ३३ वर्षीय देवराज भट्टराई पनि त्यसैगरी काम्न थाले। त्यहाँ मानिसको भीड झनै थपिदै गयो। त्यहाँ पहिलोपटक पुगेकाहरूले फूल र पैसा चढाएर सर्पको दुलो भएको क्षेत्रमा सम्मान भाव व्यक्त गरिरहेका थिए। तर यतिबेलासम्म भने सर्प दुलोभित्र पसिसकेको थियो।
कोही मानिस दुलो नजिकै गएर पूजा गर्न व्यस्त थिए। स्थानीयहरूले लामो समयदेखि नाग देवता भन्दै यसैगरी पूजा आराधना गर्दै आएको भए पनि विगत दुई तीन दिनयता भने जिल्लाका विभिन्न भागबाट त्यो नाग देवता हेर्न जानेहरूको भीड नै लाग्न थालेको छ। त्यहाँ पुग्ने भीडले कुल्चेर आसपासमा लगाएको बालीनाली भने नष्ट हुँदै गएको छ। तर पनि आसपासका जग्गाधनी भने त्यो क्षतिलाई नजरअन्दाज गर्दै नाग देवताको उत्पत्ति भएको भन्दै मख्ख परिरहेका छन्।
मन्दिर बनाउन समिति निर्माण
वनहरीको थारु गाउँमा सर्प देखिन थालेपछि स्थानीयले त्यहाँ मन्दिर निर्माण गर्न भन्दै समिति शुक्रबार गठन गरेका छन्।
स्थानीय भुवन चौधरीको अध्यक्षतामा ११ सदस्य समिति निर्माण गरिएको छ। उक्त समितिका सचिव ४४ वर्षीय दामोदर न्यौपानेले ‘नाग देवता शिव मन्दिर’ निर्माण समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
यो समितिले अब विभिन्न स्थानमा गएर आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने सचिव न्यौपानेले बताए। संकलित रकमबाट सर्प बस्दै आएको स्थानमा मन्दिर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।
त्यो सर्प नै हो, देवता हैन : वन्यजन्तु अनुसन्धानकर्ता
एक जना वन्यजन्तु अनुसन्धान कर्ता चिरिञ्जीवी खनालले भने त्यो सर्प नै भएको तर देवता नभएको दाबी गरे। ‘म हेर्न त गएको छैन, तर तपाईंले मलाई वर्णन गरे अनुसार त्यो पक्कै सर्प नै हो,देवता हैन,’ खनालले भने।
यस्ता घटना देशका विभिन्न स्थानमा यसअघि पनि हुँदै आएको बताएका उनले जाडोमा प्राय: सर्प एउटै ठाउँमा बस्ने गरेको बताए।
‘त्यो उसको बासस्थान पनि हुन सक्छ, त्यहाँ त्यसले अण्डा पारेको पनि हुनसक्छ,’ खनालले भने ‘यो सामान्य घटना हो, जाडोमा प्राय: सर्पले यस्तै गर्छ ।’